ဆောမြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ်၏ ရုံးစိုက်ရာမြို့ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်၏ ကျယ်ဝန်းသောအပိုင်းမှာ ယောချောင်းမြစ်ဝှမ်းတွင် တည်ရှိ၏။ ဆောမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသော လူမျိုးများမှာ အများအားဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများဖြစ်ကြသော်လည်း၊ ချင်းလူမျိုး နှင့် တောင်သားလူမျိုးများကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မူလက မြို့ပိုင်ရုံးစိုက်ရာဌာန မဟုတ်ဘဲ၊ လောင်းရှည်မြို့နယ်၏ ရွာကလေးတစ်ရွာမျှသာ ဖြစ်၏။ လောင်းရှည်မြို့သည် ဆောမြို့၏ တောင်ဘက် ၁၂ မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရှိ၏။ ဆောမြို့မှ ဧရာဝတီမြစ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သော ဆိပ်ဖြူမြို့သို့ နွေရာသီတွင် ကားလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မိုင် ၇ဝ ခန့်ကွာဝေးသည့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကန်ပက်လက်မြို့သို့လည်း လားဝန်တင်လမ်းရှိသည်။
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၁၄၁။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆောမြို့&oldid=473189" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။